Ukuthengisa ngeSMS kunye neziBonelelo eziMangalisayo | Martech Zone
I-SMS (inkqubo emfutshane yomyalezo) lelinye igama imiyalezo ebhaliweyo. Kwaye, uninzi lwabanini bamashishini abazi kodwa ukuthumela imiyalezo kubaluleke ngokulinganayo kwezinye iindlela zokuthengisa ezinje ngentengiso yemidiya yoluntu okanye ukuthengisa ngokusebenzisa iincwadana. Izibonelelo ezinxulunyaniswa nentengiso yeSMS zinoxanduva lokwenza ukuba ibe lolona khetho lufanelekileyo kwiintlobo ezahlukeneyo zamashishini, ajonge ukufikelela kubathengi abaninzi.
I-SMS yaziwa ngokuba nenqanaba elivulekileyo lama-98%.
Ukuba usandula ukuqala ishishini lakho kwaye ujongene nemida emininzi, kuyacaca ukuba ukolula izixhobo yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka unazo. Kuya kufuneka ukhuphe intengiso nganye onokuyenza ngelixa ulinganisa intengiso kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa kule nkqubo. Iya kuba yenye yezona zinto zikhohlisayo kurhwebo lokufumana ibhalansi kwaye iza kuza nenani lezinye izinto, njengexesha elichithwe, ulwazi lobuchwephesha kunye nendlela ekufuneka yenziwe ngayo.
Kululuvo olulungileyo ukusebenza neefemu zentengiso zeSMS ukulungiselela ukuqhuba ngeendlela ezifanelekileyo. Zininzi izibonelelo ezongeziweyo zokusebenzisa imiyalezo ebhaliweyo kwinkampani nganye. Inikwe apha ngezantsi luluhlu lwezibonelelo ezimangalisayo ezinxulunyaniswa nentengiso yeSMS.
Ukuthengisa ngeSMS kunyusa ukuBandakanyeka kwabaThengi
Kukho ukungaqondi kakuhle ukuba imiyalezo isetyenziselwa kuphela ukukhumbuza abathengi malunga nento yokuthumela iikhowudi zesaphulelo okanye zevawutsha. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba imiyalezo ye-SMS efike ngexesha izakwenza umsebenzi ofanelekileyo wokubandakanya abathengi ngeendlela ezinomdla, xa kuthelekiswa nentengiso yemidiya yoluntu yokuthengisa nge-imeyile. Kulungile ukubonelela abathengi ngemixholo yemidiya emangazayo njengamakhadi okuqala, ukhetho lomntu, kunye nemidlalo, imiyalezo ebhaliweyo, bayakwazi ukwenza ifuthe lendalo.
Abakwazi ukunceda kuphela ekwandiseni inqanaba lokuzibandakanya kodwa bayanceda ekonyuseni ulwazi ngebrand kunye nobuchwephesha bokudlulisa ngomlomo.
Uza kuyidelela xa uchitha iiyure ezininzi usenza i-imeyile efanelekileyo kwaye emva koko ufumanisa ukuba iya ngqo kwibhokisi yogaxekile yabathengi. Nokuba sele kulandelwe ezona ndlela zilungileyo zokuphelisa ifolda yogaxekile, ukuhanjiswa kwe-100% akunakuze kuqinisekiswe. Kuya kuba nzima xa ishishini kunxibelelwano lweshishini luqwalaselwa. Amashishini, kunye neenkampani ezinkulu, ziya kuba neendlela zokungena ze-imeyile, kunye nokhuseleko olwandisiweyo. Yiloo nto inoxanduva lokwenza i-SMS enye yeendlela ezilungileyo zokunxibelelana nabathengi.
Apha ngezantsi kunoluhlu lweengcebiso eziza kuqinisekisa ukuba imiyalezo ebhaliweyo iya kufikelela kwindawo efanelekileyo.
Sukusebenzisa ngaphezulu kweempawu zokukhuza okanye oonobumba abakhulu.
Qinisekisa ukuba wenza umxholo ngokungafunekiyo okanye abanye abasebenzisi banokubhloka imiyalezo ephindaphindwayo.
Qinisekisa ukuba uyawaphepha amagama abuthathaka.
I-SMS ineNqanaba eliVulekileyo eliPhezulu kunee-imeyile
Isibonelelo esikhulu esidityaniswa nentengiso yeSMS kukuba abathengi baya kuyivula imiyalezo ngokukhawuleza nje ukuba bayifumane. Oku linoxanduva lokubonelela ngemiyalezo ebhaliweyo enezinga elingcono lokuvula ngokuthelekisa ezinye iindlela zentengiso. Kulula ukuba i-imeyile ilahleke ngokulula kwiifolda zogaxekile.
Kodwa ngokuthumela imiyalezo iyathandwa, ukuthengisa imiyalezo yinto engazukuhoywa. Uninzi lwamaxesha, umthengi uya kuvula isicatshulwa esithile kwaye afunde imixholo. Ukuba ujonga indlela yokufikelela kubathengi bakho ngoku nakwabo banokubakho ngendlela engaguqukiyo, kuya kufuneka unike itekisi. Ukuze ndi Funda nzulu, ungacofa apha.
Ukuthengisa ngeSMS kuXabisa amaxabiso
Ayizukuthatha imali eninzi ukuze ithumele isicatshulwa kubathengi. Ifikeleleke ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokuthengisa njengokuthenga iintengiso ze-Facebook. Oku kuyakwenza ukuba ukuthengisa ngeSMS kube lolunye ukhetho olufanelekileyo kumashishini, ngaphandle kohlobo lwawo. Kwakhona, amashishini asandula ukuqala anokusebenzisa ukuthengisa ngeSMS ngaphandle kokuchitha imali eninzi kwezinye iindlela zokuthengisa. Kungcono kakhulu xa kuthelekiswa neendlela zokuthengisa zesiko.
Ukuthengiswa kweSMS kuHambisa uKodwa
Umbhalisi womyalezo obhaliweyo ukubhalele ukungena kwilizwe lakhe labucala, kunye nenombolo yeselfowuni, enamandla kwaye ikwanolawulo oluninzi. Luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba baziva belilungelo kwaye bekhethekile. Njengeshishini lokuqalisa, kufuneka ubhetyebhetye kwaye ube nokuqonda okufanelekileyo komthengi ngamnye kunye nokuba nakho ukwenza umyalezo ofanelekileyo ukuze ulungele isiseko somthengi.
Ukhuphiswano lweSMS lweeKhuphiswano ezineeNdawo eziMninzi eziNzima kunye neziPhucukileyo
Imiyalezo ebhaliweyo ayibandakanyi oopopayi abathandekayo okanye uyilo olubizayo. Akunyanzelekanga ukuba uhlawule imali eninzi ngokwenza isibambiso. Yonke into oyifunayo kukusetyenziswa okufanelekileyo kwamagama, anakho ukudala inqanaba lazo zonke iimveliso zokhuphiswano kunye namaphulo. Ngokusetyenziswa kwamagama afanelekileyo, uya kuba nakho ukuthatha iphulo lokuthumela imiyalezo kwinqanaba elitsha.
Iziphumo zeNtengiso zeSMS zikhawuleza
Umyalezo obhaliweyo ngokuqinisekileyo ngumjelo wangoko kwaye njengophawu, unokuqinisekisa ukuba nemiyalezo ebalulekileyo iya kufundwa phantse kwangoko. Oku kuya kunceda iimveliso ukuba ziqhubeke nokuthumela imiyalezo, enovakalelo lwexesha, njengemicimbi yokugqibela, ukukhushulwa okunxulumene nemicimbi, ukuthengisa ngokukhawuleza kunye nemibuliso yeholide. I-SMS iyakhawuleza njengokukhanyisa kwaye akukho nto ikhawulezayo xa ithelekiswa nomyalezo obhaliweyo.
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba imiyalezo ebhaliweyo imfutshane kwaye icacile. Yiya kuzo zonke izibonelelo ezidweliswe apha ngasentla ukuze uqiniseke ukuba imiyalezo ebhaliweyo yenye yezona zinto zibalulekileyo kwizicwangciso zokuthengisa osele unazo.
tags: ikhowudi yomyalezo omfutshaneImiyalezo yesmsiingcebiso ze-smsukuthengisa imiyalezoukuthumela imiyalezo
Ziyeke iiNkampani eziHlazisayo eziBheyina kumajelo eendaba oLuntu kunye noThengiso loMxholo